प्रहरीमाथि ढुंगामुडा, दुईप्रहरी जवान घाईते, नारा जुलुसको भिडियो हेर्नुहोस - 24/7 समाचार
Home / Featured / प्रहरीमाथि ढुंगामुडा, दुईप्रहरी जवान घाईते, नारा जुलुसको भिडियो हेर्नुहोस
प्रहरीको गोली लागेर दुर्गा घाईते
भैंरहवा । सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिका ९ तुरुन्तापुर निवासी दुर्गा बहादुर रोक्का घाईते भएका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेक्रवित्रम चन्द (विप्लव)को गृह गाऊमा सर्च गर्न पुगेको सुरक्षाकर्मीमाथि स्थानियले ढुंगा प्रहार गरेका छन् ।
नेकपा माओवादीका नेता विपल्वका भतिजा यादव चन्दको घरमा सर्च गर्नेक्रममा स्थानियले प्रहरीमाथि ढुंगा वर्षाएका हुन ।
ढुङ्गा लागेर प्रहरी जवान अमर वली र पुतली चौधरी सामान्य घाइते भएको वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटाले जनाएको छ ।
विहिवार विहान ५ वजे वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटाबाट खटिएको सर्च टोलीको बन्दुकको गोलीले रोक्काको खुटा छेडेर घाईते बनेको स्थानिय रामशंकर पौडेलले जानकारीदिए । घाईते रोक्काको सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा उपचार भईरहेको छ ।
रोक्काको घरमा प्रहरीले के के बरामद गरयो ?
नेपाल प्रहरी र संसस्त्र प्रहरीको संयुक्त गस्ती टोलीले रोक्काको घरबाट दुईथान एसएमजी र एकथान चाइनिज पेस्तोल सोमा लाग्ने ४ थान म्याग्जिन, ३ थान गोली, एम १६ मा लाग्ने १ सय २९ थान गोली, ४० मिटर वायरिङ तार र एउटा रिमोर्ट पनि बरामद गरेको प्रहरीको दावी छ ।
प्रहरीले रोक्काको घर खानतलासी गर्दा चाईनिज पेस्तोल एकथान, सोको दुईवटा एसएमजी गोली वरामद गरेको वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटाका प्रहरी निरीक्षक महेश्वर उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । रोक्का विपल्व समूहका कार्यकर्ता भएको वताईन्छ ।
प्रदेस ५ मा विपल्वका कार्यकर्ता धमाधम पक्राऊ
यसैविच नेपाल प्रहरी प्रदेस ५को दाड, रोल्पाबाट समेत विपल्वका कार्यकर्ता नियन्त्रणमा लिएको छ ।
यसअघि अर्घाखाची, पाल्पामा पनि विपल्वका आधा दर्जन कार्यकर्ताहरु सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा परेका थिए ।
प्रहरीले विप्लवका शंकास्पद गतिविधीहरुलाई निरुतसाहित गर्न ठाऊठाऊमा कार्यकर्ताहरुलाई नियन्त्रणमा लिन सर्च उण्ड अप्रेसनको अभियान थालेको छ ।
विद्यार्थीलाई डाल बनाएर प्रहरीमाथि ढुंगामुडा
प्रहरीमाथि एकासी विद्यार्थी र स्थानीयले एकतर्फी रुपमा ढुंगा हानेको तर प्रहरीले निकै संवेदनशील भएर आफनो बचाऊ गरेको डिएसपी उपाध्यायले वताए ।
माओवादी कार्यकर्ताले नेपाल राष्ट्रिय निमाविका विद्यार्थी र स्थानियलाई साथमा प्रयोग गरी रोक्कालाई छुटाउन दवाव स्वरुप सरकार र सुरक्षाकमीृका विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए ।
शिवगढी प्रभाव क्षेत्र
शिवगढी माओवादीको पहिलैदेखिको प्रभावित क्षेत्र हो ।
माओवादीले जनयुद्धकालमा पनि यसउक्षेत्रलाई आफनो पकेट क्षेत्र बनाएर आफना गतिविधीहरु विस्तार एवं तिव्र पारेको थियो ।
शिवगढी विपल्वको गृह गाऊमा प्रहरीले विषेश सर्च अप्रेसन अभियान थालेको छ ।
प्रचण्डसँग रुष्ट भएर विद्रोह
नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसंग लडाकु समायोजनदेखिनै तिव्र मतभेद राख्दै पार्टीको जनगणतन्त्रको उदेश्य पुरा नभएको भन्दै विपल्वले विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएर भूमीगत भएका छन् ।
एसपी पनि शिवराज गए
घटनास्थलबाट सुरक्षाकर्मीको टोली अहिले फर्केर सुन्दरी डाँडास्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा जम्मा भएका छन् ।
घटनाको विस्तुत विवरण बुझनका प्रहरी उपरिक्षक अच्युत पुडासैनी सहितको जिल्लाको थप सुरक्षा टोली समेत चन्द्रौटा पुगेको छ ।
प्रहरीका विरुद्ध विद्यार्थीहरुको नारा जुलुसको भिडियो हेर्नुहोस -सनि उल्लाह
विप्लवका कार्यकर्ता पक्राउ,कपिलवस्तुको भगवानपुर तनवग्रस्त (भिडियो)सनिउल्ला धोबी, कपिलवस्तु फागुन २३/नेकपाका केन्द्रिय अध्यक्ष नेत्र बिक्रम चन्द विप्लवको गृह जिल्ला कपिलवस्तुमा प्रहरीले घेरा हालेको छ । गएराती नेकपाका कार्यकर्ता कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिका वडा नं ९ अन्चलपुर बस्ने वर्ष ३९ का दुर्गा बहादुर रोकालाई प्रहरीले हातियार सहित पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको अनुसर पक्राउ परेका रोक्काको घर खनतलसी गर्दा smg दुई नाल, म्याग्जिन ३थान, ६८ राउन्ड गोलि,च्यनिज पेस्तोल १ नाल , म्याग्जिन र ३राउन्ड गोलि, एम 16 को १२९ राउन्ड गोलि,वाइरिङ तार त रीमोट समेत बरामद गरेको छ । अझै हातियार रहेको अशंकामा भगवानपुरका शिक्षक यादव चन्दको घरमा प्रहरिले छापा मर्ना जादा स्थानीयले विरोध गरेका थिए । शिवगढि बाल मैत्री स्थानीय शासन वडा घोषणा भएकोले बालबालिका प्रहरीलाई गाउँ प्रवेशमा रोक लगायका थिए । बालबालिका अघि आउँदा भगवानपुर गाउँ तनव पुर्ण रहेको थिए । प्रक्राउ परेका रोक्कालाई छोड्न पर्छ । बालबालिकाले प्रहरी प्रशासन मुर्दाबाद लगायतका नारा लगाएका थिए । गाउँका स्थानीय र बालबालिकाहरुले नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीका १ सय ६८ जवानलाई गाउबाट करिब एक किलोमिटर पछि सम्म हट्ना बध्य बनाएका छ्न । प्रहरीले भगवानपुरको ५ घरमा खनतलासी समेत गरेको वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटाका प्रमुख महेश्वर उपाध्यले बताए । अझै गाउको केही घरमा खनतलासी गर्न जादा गाउले तथा विद्यार्थिले विरोध गरेपछी हामी पछी हाटेको उनले बताए । प्रहरी अझै भगवानपुर नजिकै रहेको सुन्दरी डाडा चौकीमा तैनाथ रहेको छ । प्रहरिको फौज देखेर स्थानीय त्रशीत समेत भएका छन ।
Gepostet von Sanny Kapilvastu am Donnerstag, 7. März 2019
Province-5 नेपाल प्रहरी नेपाल समाचार	2019-03-07
Tags Province-5 नेपाल प्रहरी नेपाल समाचार
Previous रुपन्देही र बाँके विजयी
Next विश्वविद्यालयमा प्रयोगात्मक शैली अपनाईदैं